Ninkii Madaxa Ka Ah Burburinta Masaajidda Muslimiinta Hindiya Oo islaamay Kuna Dhawaaqay dhisidda 90 Masjid.
Wednesday February 14, 2018 - 20:09:05 in Wararka by Super Admin
Mid kamida hoggaamiyaashii ugu caansanaa dadka Hinduuska gaalada ah ee wadanka Hindiya ayaa ku dhawaaqay in uu soo islaamay arrintaas oo si aad ah looga hadal hayo wadanka Hindiya ee dhaca qaaradda Asia kana mid ah wadamada ugu dadka badan caalamka.
Kaar Sefak oo kamid ahaa dadka Hinduuska ah aadna ula dagaallamay dadka muslimiinta wadankaas looga tirada badanyahay ayaa ku dhawaaqay in uu soo galay diinta naxariista badan ee islaamka, wuxuu kamid ahaa dadkii hoggaaminayay olole ballaaran oo lagu burburiyay masaajidda muslimiinta ee kuyaal gobollada dalka Hindiya.
Kaar Sefak oo warbaahinta kula hadlay magaalada New Delhi ayaa ballaan qaaday in uu dhisi doono tobanaan masjid uuna ka qeyb qaadan doono faafinta diinta islaamka, isagoo hadlayay ayuu tibaaxay in uu aad uga qooma meynayo dhibaatadii uu ugeystay muslimiinta.
wuxuu sheegay in uu dhisayo 90 masjid oo muslimiintu leeyihiin wuxuuna ballan qaaday in uu difaaci doono islaamka isagoo aad uga murugeysnaa ka qeyb qaadashada burburintii masjidka taariikhiga Babari sanaddii 1992 wuxuuna tallaabadaas ku sifeeyay wax xun oo laga yaaq yaaqsado.
26 sanadood ka hor ayuu Kar Sefak wuxuu fuullay minaaradda masjidka isagoo xilligaas hor kacayay dad xagjirayaal Hinduus xaaqidiin ah, walaalka muslimka ah ee soo hanuunay wuxuu labaxay Max'med Caamir, warbaahinta Hindiya waxay sheegtay in tallaabadani aheyd mid lama filaan ah oo malaayiin kamid ahaa taageerayaashiisa ay ku tilmaameen khiyaalli laakin ay wax walba xaqiiqsadeen markii ay arkeen Maxamed caamir oo ku dhawaaqaya kalimadda Towxiidka.
Ninkan muslimka ah waalidkiis wuxuu kamid ahaa dadkii la shaqeeyay halgamaagii caanka ahaa ee Reer Hindiya Gaandi, sidoo kale waxaa isna diinta islaamka qaatay nin lagu magacaabo Boojandarbaal isna wuxuu la baxay maxa'med cumar,Ninkaas ayaa caan ku ahaa burburinta masaajidda muslimiinta oo uu ku bedeli jiray macaabid ay leeyihiin dadka hunduuska ah laakin wuxuu hadda bilaabay in uu masaajid dhiso.